မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ပညာရေးလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ပညာရေးလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား
အလုပ် 20 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်အတွင်း | စာချုပ်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်သေ | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
Receptionist ( Customer Service)
Job Summary (အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကျဉ်းချုပ်) Customer Service Assistant သည် Customer Service Officer ၏ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာ၍ အဖွဲ့အစည်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော Customer Service များပေးနိုင်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
Art Teacher (3-Posts )
(အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကျဉ်းချုပ်) ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား ပန်းချီပညာရပ်များကိုဂရုစိုက် သင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။ ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော သင်ကြားမှုစနစ်များကို အသုံးပြုသင်ကြားပေးနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။
Lab Assistant (3- Posts)
Lab Technician ၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းဆိုင်နှင့် သိပ္ပံပစ္စည်းစက်ရုံမှ ဝယ်ယူရ မည်ဖြစ်သည်။ Chemistry Instruments များအား အစဦးစွာ မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Science Teacher (Grade4to6- Edexcel Curriculum)
Teaching Edexcel Science to Grade4to6students.
Edexcel Mathematics Teacher(Grade4to 6)
Teaching Edexcel Mathematics to Grade4to6students.
Edexcel English Teacher( Grade4to6)
Teaching Edexcel English to Grade4to6students.
Primary Teacher (Grade 1, 2, 3-Myanmar Curriculum) -(3Posts)
ဘာသာရပ်ဆရာမသည် Subject Coordinator ၏ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာ၍ မိမိတာဝန်ယူ ထားသည့်အတန်းများ၏ သင်ကြားရေးကိစ္စအ၀၀တို့တွင် အဆင်ပြေအောင် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ ကလေးများလိမ္မာယဉ်ကျေး၍ အရည်အချင်းများတိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးရန်နှင့် မိမိဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိဘဆရာများအကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား မှုတို့ကို အဆင်ပြေစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ။
Economic Teacher-(High School - Myanmar Curriculum)
Geography Teacher (Middle School-Myanmar Curriculum)
ဘာသာရပ်ဆရာမသည် Subject Coordinator ၏ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာ၍ မိမိတာဝန်ယူ ထားသည့်အတန်းများ၏ သင်ကြားရေးကိစ္စအ၀၀တို့တွင် အဆင်ပြေအောင် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ပေးရန်၊ ကလေးများလိမ္မာယဉ်ကျေး၍ အရည်အချင်းများတိုးတက်အောင် သင်ကြားပေးရန်နှင့် မိမိဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိဘဆရာများအကြား အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား မှုတို့ကို အဆင်ပြေစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်အကျဉ်းချုပ်) လက်ထောက်ဆရာမသည် အတန်းပိုင်ဆရာမနှင့် ဘာသာရပ်ဆရာမများအား သင်ကြားရေးနှင့် အတန်းကိစ္စတို့တွင် အစစအရာရာ အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးရန်၊ ကလေးများအေးချမ်း ပျော်ရွှင်စွာစာသင်ကြားနိုင်အောင် စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်နှင့် မိဘဆရာများအကြား လိုအပ်သော ကျောင်းကိစ္စအ၀၀တို့အား ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့်အကြောင်းကြားရန်တာရှိသည်။
IGCSE Biology Teacher has to plan lessons, find relevant resources, teach students and check their progress onaweekly basis. IGCSE Biology Teacher has to collaborate with teachers from Academic Department and report to Principal.
IGCSE English Teacher has to plan lessons, find relevant resources, teach students and check their progress onaweekly basis. IGCSE English Teacher has to collaborate with teachers from Academic Department and report to Vice Principal.
IGCSE Chemistry Teacher has to plan lessons, find relevant resources, teach students and check their progress onaweekly basis. IGCSE Chemistry Teacher has to collaborate with teachers from Academic Department and report to Principal.
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ 1 လူမှုရေးနှင့် လုပ်အားပေး အလုပ်အကိုင်များ2သုတေသန၊ သင်ကြားရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေး အလုပ်အကိုင်များ 17
မန္တလေး2ရန်ကုန် 18